Iflethi okanye indlu ekwicomplex ese - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ese
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguLaura-Jayne
Iflethi eseNorth Beach yiflethi okanye indlu ekwicomplex esandul 'ukulungiswa, ekumbindi weStornoway. Ijonge embindini wedolophu nakwiLews Castle Grounds.
Izinto ezinokusetyenziswa ekuhlaleni zikumgama okufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex: I-Co-op, iivenkile zekofu, ivenkile ye-Harris Tweed, iibhari, iivenkile zokutyela, abathengisi beentlanzi kunye nabathengisi beentlanzi.
Inayo yonke into oyidingayo ukuze uhlale. Indawo efanelekileyo yokuhlala abantu abathandanayo abafuna ukubuka iziqithi zaseNtshona.
Iflethi eseNorth Beach House inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uhlale kamnandi eStornoway. Ihlala embindini wedolophu xa ubona idolophu kunye neLews Castle Grounds, yindawo efanelekileyo yokubuka nokuphola.
Iflethi ibekwe kakuhle kuzo zonke iindlela zothutho ukuze ube kwindawo entle yokubuka.
Esi siqithi yindawo ekhethekileyo yokuhlala. Ayiphelelanga nje kwisiqithi esihle, kunye nolwandle lwaso olumangalisayo kunye nezilwanyana zasendle, kodwa yahlukile kwindlela esiphila ngayo.
Abantu abaqithi ngokuqhelekileyo banobubele kakhulu ibe bayakuvuyela ukuthetha neendwendwe nokuva ibali lazo. Sihamba ngesantya esahlukileyo sobomi ukuya kwabo bakumbindi, nto leyo eyenza ibe yindawo entle yokutyelela ukuze uphumle.
Ukongezelela kwezi zingasentla, inkcubeko yethu ihambelana nathi sonke kwaye siyazidla ngokuba yiCeltic kwaye sincike kakhulu kwimvelaphi yethu yamaKrestu, okuthetha ukuba iiCawa zahlukile kuba yonke into ivaleka kwaye ubomi buyaphela usuku ngeveki.
Umbuki zindwendwe ngu- Laura-Jayne
Ungena ngebhokisi enesitshixo ukuze ufumane izitshixo. Ndikufuphi, ngoko ndingakuvuyela ukunceda ngayo nantoni na kwaye ndiyakuvuyela ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo ngomyalezo.